အိုင်တီကိုကို, Author at IT-KOKO - Page5of 17
အကောင်းဆုံး အစား အသောက် စာရင်း
By အိုင်တီကိုကို on Friday, March 8, 2013
ရန်ကုန်ပြန်ရင် ဝါးတီးဖွင့်မယ့်စာရင်း။ ဖေ့ဘွတ်ပေါ်က မလာတာ။ ၁. တရုတ်တန်း ကိုကိုညီညီ ထမင်းကြော်ဆိုင်က ဝက်သားကြော်နဲ့ ချဉ်ပေါင်ကြော် ၂. ၁၅လမ်းထိပ် ကိုဆယ်သန်းဆိုင်က ဝက်သားလုံးယိုးဒယားဟင်းချို ၃. ဆင်မလိုက်လမ်းဆုံက ဝက်သားစပယ်ရှယ်ထမင်းကြော် ၄. လှည်းတန်းဗဟိုလမ်းက ပြည် ဒေါ်ဥထမင်းသုပ်နဲ့ ဆိတ်သားကြော် ဆိတ်သားလုံးကြော် ၅. ဝက်လယ်သမားဟင်း သဘောသီးထောင်း@ ပန်းစွယ်တော် Thai Express ၆. မင်းလမ်းမုန့်တီ က ရေချိုပုဇွန်မီးဖုတ်သုပ် နဲ့ ငရုပ်သီးငါးပိဖျော်…. ၇. မြေနီကုန်း ရှမ်းကုန်းလမ်း သီရိဝဏ်းတား က ယိုးဒယားဝက်သားသုပ် ၈. ဆာ့ခုမ် အမဲလျှာနဲ့အမဲခြောက်ထောင်း ၉. Green Curry Seafood Spaghetti @ Coffee Circle ၁၀. တောင်ဥက္ကလာ အောင်ရတနာဆေးခန်းနားက …
Presentation with PowerPoint slides is too mainstream:D
By အိုင်တီကိုကို on Sunday, February 24, 2013
PowerPoint ဆိုတာ Presentation တွေ အားလုံးနီးပါးမှာ သုံးတဲ့ MS ရဲ့ Software ဆိုတာ လူတိုင်းသိပြီးသားပါ။ လှပတဲ့ ဒီဇိုင်းတွေနဲ့ အမျိုးမျိုး ထွင်ပြီး အသုံးပြုကြပါတယ်။ Presentation လုပ်တာ ပရိတ်သတ် အာရုံကို ဖမ်းစားနိုင်ဖို့ အတွက် ဒါမှမဟုတ် အထူးအဆန်း တွေစိတ်ကြိုက်လုပ်ဖို့အတွက် ဒါမှမဟုတ် အိုင်တီ ပညာရှင်ဆန်ဆန်လုပ်ဖို့အတွက် ဒါမှမဟုတ် MS Office မသွင်းထားဘဲ နဲ့ Presentation လုပ်ဖို့အတွက် အောက်ကို ဆက်ဖတ်ပေးပါ။ သင့်ကို အထောက် အကူပြုပါလိမ့်မယ်။ HTML CSS JS ကို အခြေခံလောက်ရှိဖို့တော့လိုပါတယ်။ Chrome Browser မှာဆို ပိုအစဉ်ပြေပါတယ်။ Reveal.js Impress.js Deck.js Google Slides Template …
Myanmar Keyboards for Android and iOS
By အိုင်တီကိုကို on Monday, February 18, 2013
MMKeyboard ကတော့ Android အတွက် ဖြစ်ပါတယ်။ TTKeyboard ကတော့ iOS အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ Technomation ကနေ အသစ်ထုတ်လိုက်တဲ့ ကီဘုတ်တွေဖြစ်ပြီးတော့ သုံးသူတွေ အကြိုက်တွေ့စေမယ့် Feature တွေ ပါပါတယ်။ Free and Pro ဆိုပြီး နှစ်မျိုးထုပ်လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်။ Smart Zawgyi ကီးဘုတ်တွေဖြစ်ပါတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ Smart Zawgyi ဆိုတာကတော့ Zawgyi Keyboard ကို သုံးစွဲသူတွေ လွယ်အောင်လုပ်ထားတဲ့ ကီဘုတ်ဖြစ်ပါတယ်။ ရရစ် တွေအများကြီး ရွေးစရာ မလိုဘဲ တစ်ခုတည်းနဲ့ သူ့အလိုလို စာလုံးကို လိုက်ပြီး ပြောင်းပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ အသေးစိတ်သိချင်ရင်တော့ ဒီလင့် မှာ ဖတ်လို့ရပါတယ်။ ရန်ကုန် မန္တလေး ဖုန်းဆိုင် များမှာ မေးမြန်းဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်။ MMKeyboard …
By အိုင်တီကိုကို on Tuesday, February 5, 2013
ထွက်လာပါပြီ။ iOS 6.1 အတွက် Jailbreak ပါ ဒီလင့်မှာ Evasi0n jailbreak tool ကို ဒေါင် လိုက်ပါ။ ပြီးရင်တော့ ဒီမှာ iOS 6.1 ကို ဒေါင်းလိုက်ပါ။ ဖုန်းကို လော့မချထားပါနဲ့။ Password ခံထားတယ်ဆိုရင် ပြန်ဖြုတ်လိုက်ပါ။ (Settings –> General –> Passcode Lock –> Off) iTunes နဲ့ Xcode ကိုလည်း ပိတ်ထားပေဖို့ မမေ့ပါနဲ့။ ပြီးရင်တော့ စလို့ရပါပြီ။ Evasi0n ကို run လိုက်ပါ။ နောက်ပြီးရင် ဖုန်းကို computer နဲ့ ဆက်လိုက်ပါ။ Lightning cable(usb) နဲ့ပါ။ ပြီးရင်တော့ jailbreak နှိပ်ပြီး …
No more RIM, Only BlackBerry
By အိုင်တီကိုကို on Thursday, January 31, 2013
RIM ရဲ့ CEO Thorsten Heins က ဒီနေ့ဘဲ RIM (Research in Motion) ကို BlackBerry လို့ဘဲ ပြောင်းလဲပြီး နောက်ပိုင်း ဆက်လုပ်သွားတော့မယ်လို့ ပြောသွားပါတယ်။ ​”One brand. One promise” ဆိုပြီးတော့ ပြောသွားပါတယ်လို့ Engadget မှာရေးထားပါတယ်။ နောက်တစ်ခုကတော့ BB10 အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော် BB ကို ကြိုက်တာကြာပါပြီ၊ အရင်ဖုန်းတွေက အရမ်းလူကြီးဆန်ပြီး screen သေးလို့ မသုံးဖြစ်ခဲ့ပါဘူး။ အခုလည်း ကျွန်တော် ဝင်းဒိုးဖုန်းကို ကိုင်ပြီး ၁ ပတ်လောက်မှာ အားနည်းချက်တော်တော်များများ တွေ့လိုက်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ဖုန်းက အရမ်းပူနေတာပါဘဲ။ အဲ့ဒါကို service center သွားပြဖို့ မအားသေးတာနဲ့ မပြဘဲ …
By အိုင်တီကိုကို on Saturday, January 19, 2013
တစ်ပတ်လောက်တော့ရှိပြီ ကျွန်တော် ဝင်းဒိုးဖုန်း ကိုင်နေတာ။ Nokia Lumia 920 ပါ။ စကိုင်တုန်းက တော်တော်လေး ကြောင်တောင်တောင်ဖြစ်တယ်။ အရင်တုန်းက Android နဲ့ iOS ဘဲကိုင်ဖူးတော့ WP ကို တော်တော်လေး အကျင့်ပါအောင် လုပ်ရတယ်။ အထူးသဖြင့် ကတော့ UI အပိုင်း အပြောင်းအလဲကြောင့် လုပ်ရကိုင်ရတာ နှေးတာပေါ့။ Metro UI ကမဆိုးဘူးလို့တော့ပြောလို့ရတယ်။ အားနည်းတာကတော့ Customize လုပ်လို့ များများစားစားမရတာပါဘဲ။ နောက်တစ်ခုက App ပိုင်း တော်တော်လေးအားနည်းတယ်လို့ပြောရမယ်။ ပိန်းတိန်းတိန်း App တွေအများကြီး၊ ကျွန်တော်တို့ ကျောင်းမှာ လုပ်တဲ့ ပုံမှန် နေ့စဉ် ပရောဂျက် အဆင့်လောက်တွေ အများကြီး။ တော်တော်များများက mobile web view ပုံစံတွေကို …
By အိုင်တီကိုကို on Wednesday, January 16, 2013
By အိုင်တီကိုကို on Tuesday, January 15, 2013
အလုပ်ရှာရတာ ထင်သလောက် မလွယ်မှန်း ကိုယ်တို်င် ရှာကြည့်တော့မှ သိတယ်။ စင်္ကာပူမှာ ကျောင်းပြီးရင် အလုပ်လွယ်လွယ် ရတယ်ဆိုတာ ခေတ်ကုန်သွားပြီလို့ ဆိုရမယ်။ အစိုးရကျောင်းပြီးပြီး၊ အပြင်ကျောင်းပြီးပြီး ရှာရတာ ခက်တာဘဲ။ အရင်တုန်းကလို ကျောင်းပြီးတာနဲ့ အလုပ်ဆိုတာ မရှိတော့ပါဘူး။ PR ဆိုတာ လည်း ပေးတယ်လို့ မကြားမိတော့ဘူး။ ကျွန်တော်တို့လည်း မရပါဘူး။ Republic Polytechnic မှာကျောင်းပြီးခါနီး ငါဘာတွေသိခဲ့လည်း ကျောင်းက ငါ့ကို ဘာတွေသင်ပေးခဲလဲဆိုတာ ပြန်တွေးကြည့်မိရင် အလုပ်ရှာရမှာ ရင်လေးတယ်။ အတွေ့အကြုံရှိမှ အလုပ်ရှာရတာလွယ်တယ်။ PR ဖြစ်မှ လွယ်တယ်။ မျိုးစံုပြောကြတာပေါ့၊ တကယ်က ကိုယ့်မှာ အရည်အချင်းတကယ် ပြည့်စံုတယ်ဆို ရှာရတာ လွယ်ပါတယ်။ စင်္ကာပူနိုင်ငံသားတိုင်း အလုပ်လွယ်လွယ် မရကြပါဘူး။ အရည်အချင်းရှိတဲ့ သူတိုင်း အလုပ်ရကြပါတယ်။ …
HTC Myanmar Sar
By အိုင်တီကိုကို on Friday, January 11, 2013
HTC ဆိုဒ်မှာ မြန်မာဘာသာနဲ့ official ဆိုဒ်တစ်ခုကို ထည့်သွင်းပေးထားပါတယ်။ လွန်ခဲ့သော နှစ်က HTC ရဲ့ CEO Peter Chou မြန်မာနိုင်ငံကို လာပြီး ပြောင်းလဲလာတဲ့ မြန်မာ မိုဘိုင်းလောက အခြေအနေပါ။ လွယ်လွယ်ပြောရရင်တော့ ကောင်းမွန်တဲ့ ပြောင်းလဲမှုတစ်ခုပေါ့။ ကျွန်တော်တို့တွေ မြန်မာလို ဖတ်လို့ရတယ်လေ။ နောက်ပြီး ဖုန်းမှာလည်း built-in မြန်မာစာတွေ၊ ကီးဘုတ်တွေ ထည့်ပေးမယ်လို့ ကြားနေရတယ်။ SanMyanmar နှင့် ပူးပေါင်းပြီး လုပ်ကိုင်မယ်လို့ ကြားသိရတယ်။ ဒါလည်းကောင်းတာပါဘဲ။ မြန်မာနိုင်ငံက အသုံးပြုသူတွေအတွက် ကြီးမားတဲ့ တိုးတတ်မှုကြီးပေါ့။ မြန်မာစာမြင်ရဖို့ root လုပ်စရာမလိုတော့ဘူး။ ဆိုင်သွားပြီး အကိုရေ ဖောင့်သွင်းပေးပါ ပြောစရာမလိုတော့ဘူး။ developer တွေလည်း အချိန်ကုန်ခံပြီး ကီးဘုတ်တွေ၊ root လုပ်နည်းတွေ …
Windows Live Messenger (WLM) would be turned off by March 2013
မြန်မာနိုင်ငံက တော်တော်များများကတော့ Google Talk နဲ့ တော်တော်လေး ရင်းနှီးပါတယ်။ စင်္ကာပူလို နိုင်ငံမှာတော့ Microsoft Live Messenger ကို တော်တော်များများ သုံးကြတယ်။ အခုတော့ Microsoft က ၂၀၁၃ ကျရင် သူ့ရဲ့ Messenger ကို ပိတ်တော့မယ်လို့ ပြောထားပါတယ်။ သူဝယ်ထားတဲ့ Skype ကို အားလုံးပြောင်းသုံးဖို့ ပြောထားပါတယ်။ Skype ကလည်း တော်တော်လေး ကောင်းတဲ့ App ဖြစ်နေပါပြီ။ နောက်ပြီး contact အားလုံးကို Skype မှာသုံးလို့ရအောင် လုပ်ပေးမယ်လို့လည်း ဆိုထားပါတယ်။ အဓိက ပြောင်းရတဲ့ အကြောင်းကတော့ သုံးသူတွေ လျော့ကျလာတာက တစ်ကြောင်း၊ Messenger က Microsoft ရဲ့ product တွေဖြစ်တဲ့ …